M-Kutonga - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Nekuwedzera kwekuda kwemafoni uye ewebhu maapplication, vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuda mhinduro dzemafoni kubva kumatare ehurumende zvakare. Kubva pamitero kusvika pakubhadhara bhiri, mafomu epamhepo kuendesa, uye ruzivo kune chiito chinopesana nazvo, zvese zvinovimba nekureruka kwekushandisa uye nyore. M-Governance inosimbisa zvirinani zviripo zveaya masevhisi nekugonesa kuwana nyore kune yeruzhinji ruzivo chero nguva, chero kupi uye nekuunza masevhisi matsva kuindasitiri yehurumende. Nhasi nhare mbozha yabuda senzira yekuparadzira ruzivo mumabasa eHurumende.
Isu, at newgenapps tinzwisise kuwedzera kuri kudiwa kwaM-Governance.Masevhisi edu eM-Governance anogona kupa mabhenefiti akadai semitengo yakaderera, Wider kusvika, manejimendi zvirinani, kutarisa nguva chaiyo, kugona kukuru uye kugona kuchinjika, kufambisa hurumende yakasvibirira, mabasa akasarudzika nezvimwe.
Rubatsiro muM-Governance, Iyo mamiriro ehunyanzvi social network kuvandudza?
Tinogona kupa mhinduro muminda inotevera yeM-Governance:
Hutano, Dzidzo, Zvekurima, Basa, Mutemo wekufambisa uye kurongeka, Kubhadharwa kweMari / Mitero, Bhiri yekubhadhara maapp- mvura, runhare, magetsi, Maitiro ezvekutonga nemutemo.